Laser osise Machine, Optical Fiber Laser Machine Supplier - Vomeiya
Metal Laser Ịcha Machine
Eriri Laser Ịcha Machine
Nonmetal Laser osise na ọnwụ igwe
Tọrọ ntọala ke mbubreyo 2014, ụlọ ọrụ na-pụrụ iche na-amị dị iche iche nkọwa nke laser osise igwe, ngwa anya eriri laser marking igwe, ngwa anya eriri laser ọnwụ igwe. The ụlọ ọrụ ka nyekwara kpamkpam na-emepe emepe inogide edoghi na akpaaka nke laser ígwè ọrụ. Ngwaahịa na-bụ-eji n'ihi na mbupụ.
Onye ọ bụla ngwaahịa a na-ọma mere, ọ ga-eme ka ị na-afọ ojuju. Anyị na ngwaahịa na mmepụta usoro nwere ...
Taa, anyị na-akwa ahuhu na ezi obi ka n'ihu mezuo anyị zuru ụwa ọnụ ahịa 'mkpa ezi mma ...
Na technology ka isi, na ịzụlite ma na-emepụta elu-edu ngwaahịa dị ka ...
Eriri Laser Ịcha Machine 3015C
2513 Co_2 laser ọnwụ igwe
Gbasaa Fiber Laser akara Machine
Cabinet Fiber Laser akara Machine
1610-1810 Automatic nri laser ọnwụ igwe
Eriri Laser Ịcha Machine 3015N
Eriri Laser Ịcha Machine 3015H